Iska Hor Imaad Ka Dhacay Agagaarka Madaxtooyada Iyo Sargaal Sare oo Lagu Dilay – Balcad.com Teyteyleey
Iska Hor Imaad Ka Dhacay Agagaarka Madaxtooyada Iyo Sargaal Sare oo Lagu Dilay
Ciidamo katirsan ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya oo ku sugnaa afaaafka hore ee Tayaatarka Qaranka ayaa maanta dil u geestay Taliye kuxigeenkii hore ee Ciidanka Nabad sugida gobolka Banaadir Gaaashaanle Ciise Xasan Caraale (Jiijile).
Sida aan wararka ku helnay dilka sargaalkan waxaa ka dambeeyay ciidamo katirsan Milatariga gaar ahaan kuwa ilaalada Madaxtooyada ee loo yaqaan Koofi Gaduud, ciidankan ayaana ka careesnaa sida wararka ku helnay askari Duhurnimadii maanta looga dilay Isgooska Ceel Gaabta.
Ciidamo katirsan kuwa Xasilinta oo watay gaari Cabdi Bille ah ayaa la sheegay in askari katirsanaa ilaalada Madaxtooyada ku dileen isgooska Ceel Gaabta, ciidanka dilka geestay ayaana la sheegay in halkaasi isaga tageen.
Gaari Cabdi Bille ah uu la socday Taliye kuxigeenkii hore ee Nabad sugida gobolka Banaadir Ciise Jiijiile oo kasoo baxay Xarunta Nabad sugida ayaa la sheegay in lagu istaajiyay koontarool kuyaala tayaatarka hortiisa.
Ciidanka Milatariga ayaana la sheegay in qoryo ku qabteen gaariga Cabdi Billaha ay la socdeen sadex askari oo xirnaa dareeska Xasilinta iyo Sargaalkan katirsanaa Nabad sugida, waxaana ciidanka la sheegay in rasaas ku fureen gaariga markii uu kasoo degay sargaalka .
Goobjoogaaal ayaa ku waramay in gaariga markii qoryaha lagu qabtay uu kasoo degay Taliye Ciise Jiijiile si uu ula hadlo askarta balse mar qura rasaas ooda looga qaaday, waxaana halkaasi ku dhintay Ciise Jiijiile iyo askari kale oo la socday , waxaa sidoo kale ku dhaawacmay labo askari kale oo mid kamid ah dhaawac culus uu ku yaalo.
Meydka sargaalka la dilay ayaa la geeyay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya iyadoona looga sii qaaday Xarunta CID-da iyo Isbitaalka Madiina si baaritaano loogu sameeyo, waxaana wararka aan helnay sheegayaan in meydka mar kale dib loogu celinayo Madaxtooyada si xal looga gaaro dilkan.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’isul Wasaare Xasan Kheyre ayaa kulan deg deg ah arintan ka leh sida aan wararka ku helnay, waxa ayna Madaxda la kulmeen saraakiisha ilaalada Madaxtooyada iyo kuwa Nabad sugida si loo qaboojiyo xiisada dilka ka dhalatay.
Waxaa socda baaritaano ku aadan sida uu ku dhacay dilka sargaalkan katirsanaa Nabad sugida oo markii hore warar soo baxayay sheegayeen in lagu dilay dagaal dhax maray Ciidanka uu watay iyo Milatariga ee Koonaroolka ku sugnaa. Dowlada Soomaaliya ayaan wali wax war ah kasoo saarin dilka loo geestay sargaalkan katirsanaa ciidanka Nabad sugida iyo sidoo kale iska hor imaadyo kale oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho una dhaxeeyay ciidamo kawada tirsan dowlada.
Sargaalka la dilay Ciise Jiijiile ayaa ahaa Taliye kuxigeenkii hore ee ciidanka Nabad sugida gobolka Banaadir xiligii uu taliyaha Nabad sugida ahaa Jeneraal Gaafow, waxa uu sidoo kale horey usoo noqday taliyaha ciidanka Nabad sugida degmooyinka Dayniile iyo Howl-Wadaag.
Ciise Jiijiile ayaan mudooyinkan ku dhax jirin shaqada ciidanka dowlada gaar ahaan Nabad sugida sida eheladiisa noo sheegeen, waxaana sargaalkan la sheegay in dhoorkii bil ee lasoo dhaafay uu la jiifay xanuun hayay dhawaana uu kasoo bogsada.
The post Iska Hor Imaad Ka Dhacay Agagaarka Madaxtooyada Iyo Sargaal Sare oo Lagu Dilay appeared first on Ilwareed Online.
Kooxda Dekedda oo Hanatay Horyaalka Soomaaliya
Sanbaloolshe oo hanjabaad kulul u diray Xildhibaan Mahad Salaad kana hadlay isku dhaca ciidamada (Dhageyso)